အဘယ်ကြောင့်ယုန်သေဆုံးနေကြသနည်း အစာကျွေးမယ့်တက်ခူး .... ငါပိုလျှံအရည်ရွှမ်းစာကျွေးခြင်း၏နောက်ခံအပေါ် coccidiosis ထင်ပါတယ်။ မြက်ပင်ထားပါသို့မဟုတ်အနည်းငယ်အခြောက်မြက်, ဂေါ်ဖီထုပ်ပေး, coccidiostatic မကြည့်ပါဘူး။ မေးခွန်းလွှာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအီးမေးလ်ထဲတွင်, ဖြစ်လိမ့်မည်။ ...
ကျွန်တော့်ကိုပြောပြပါရူဆွမ်လူမျိုး Red Book တွင်မည်သည့်တိရစ္ဆာန်အမျိုးအစားများပါရှိသနည်း။ !!! သငျသညျအပေါငျးတို့သတိရိစ္ဆာန်များကိုလိုအပ်ပါကဤငှက်များ၊ တိရိစ္ဆာန်များ၊ ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါများ၊ တွားသွားသတ္တဝါများနှင့်ငါးများဖြစ်သည်။
Cordyceps ကဘာလဲ? သင်ကစားပွဲကျွန်တော်တို့ကို၏နောက်ဆုံးသိ? ကောင်းပြီ, အဲဒီမှာကပ်ပါးမှိုလူတွေဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့တကယ်အသက်တာ၌သူသာအင်းဆက်ပိုးမွှားအပေါ်တစ်ဦးကပ်ပါးဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုအရှင်, နေမှတွားစေ ...
saprotrophs ကဘာလဲ? ဂရိကနေ။ ) ပုပ် ... နှင့်ဖလား sapros, heterotrophic သက်ရှိအစားအစာအတွက်အသုံးပြုကြသည်အော်ဂဲနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒြပ်ပေါင်းများ mrtvyh အလောင်းတွေသို့မဟုတ်အထီးကျန် (မစင်) တိရိစ္ဆာန်များ။ အော်ဂဲနစ်၏သတ္တုဓာတ်ပါဝင်အားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ ဒြပ်ပေါင်းများ, အက်စ်အရေးကြီးသောဖွဲ့စည်း ...
ရေကန်အကြောင်းကိုဘာမှရေးရန်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးတစ်ခုခုကစားသမား lgochnyh (Pulmonata) မှခရု၏သူ့ကို truncatula (LAT ။ Lymnaeidae) lgochnyh မိသားစုအကြောင်းကိုကျမ်းစာလာသည်ကားရှိရာ site တစ်ခုပေးပါ။ ကျယ်ပြန့်လတ်ဆတ်တဲ့မြို့သား rasprostrannnye ...
သူ marabou တောငန်း Marabou # 769; သုံးမျိုးပါဝင်သည်သောတောငန်းမိသားစု, ငှက်၏ (လတ်။ Leptoptilos) genus ။ ပမာဏအတွက်ကြင်နာ marabou ငှက် 110 ထံမှ 150 စင်တီမီတာ, ပြင်းအားမှကွဲပြားခြားနားသည် ...
အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးဂျိုကာ? Motyl ဘုံအမည်ဖြင့် chervevidnye ။ 25 မီလီမီတာအရှည်ရောက်ရှိအနီရောင်ခြင်လောင်း။ သူကသူတို့ရှာတွေ့သောအပင်များ, ရေကန်များနှင့်စီး, rummaging များနှင့်ရှုတ်ထွေးကန်၏ရွှံ့တှငျနထေိုငျ ...
ရေမွှေးသည်မော့စ်နှင့်အတန်ကြာမှမည်သို့ပေါက်လေ့ရှိသနည်း။ အပင်များသည်နှစ်ရှည်ပင်များဖြစ်သောအပင်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်စိုစွတ်သောအရိပ်ရသည့်နေရာများ၊ သစ်တောမိုးအောက်နှင့်စိုစွတ်သောမြစ်များပေါ်တွင်မကြာခဏကြီးထွားကြသည်။ ဖမ်မှာ ...
ဘာ thrush အစာကျွေးသလော ပန်းသီးနှင့်မုန့်အပြင်ဘာမှမစားဘူး။ Blackbird အင်းဆက်ပိုးမွှား, ပင့်ကူ, worm, Clam, သီးပေါ်အစာကျွေး။ အစာစားခြင်းမဟုတ်သောကြောင့်, ဒါကြောင့်လုံလောက်အောင်ပါပဲ။ Blackbird Blackbird ငှက်, အရွယ်အစားအလယ်အလတ်ရှိပါတယ် ...
nautiluses အဘယ်သူနည်း သင်ပြုပါလျှင်ဒီအုပ်စု, ယခု Yu-ပတေရုသခဲ့တယ်) ကို Nautilus Pompilius, 90 နှစ်များတွင်လူကြိုက်များအုပ်စု Vyachislavom Butusova ယခုအဖြစ်မဟုတ်သကဲ့သို့, ဖြစ်ပါတယ်။ အီးသီခငျြးမြားတံပိုးမှုတ်သောအခါ ...
ဘယ်လိုစားသုံးမှုတွေရလဲ။ သူတို့ကိုဘယ်လိုကြော်မလဲ ဟုတ်တယ်၊ သူတို့အားလုံးစားလို့ရတယ်။ ပဲရစ်တွင်ပန်းခြံများရှိမီးသွေးများကိုဖုတ်ရသည်။ မီးထဲကအာလူးတွေကိုမြည်းစမ်းဖို့စားသုံးသူတွေကိုသတိရစေတယ်၊
Mayflies ။ အဲဒီမှာအတောင်ကိုယ်စားလှယ်များ?, သူတို့ကအစုံစားသတ္တဝါများ mouthparts ရှိပါသလဲ, အဘယျနညျး, နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအမျိုးအစားကဘာလဲ? hi ku အရွယ်ရောက်ပြီးသူ mayflies သူတို့ mouthparts လျှော့ချကြမှာအားလုံးအစာကျွေးကြပါဘူး။ အတောင်ပံဒုတိယပေမယ့်,2စုံတွဲများရှိ ...
အအေးမိသွေးတိရိစ္ဆာန်များကဘာလဲ? အားလုံးကျောရိုး, ငါး, ရေနေနှင့်တွားသွား။ Temp-pa ခန္ဓာကိုယ်သူတို့များသောအားဖြင့်သာ 12 ကို C မြင့်မားတဲ့တစ်ခုရဲ့ tempo-ry ပတ်ဝန်းကျင်သို့မဟုတ်ညီမျှ။ သူတို့ထဲကအတော်များများဟာ ...
ဘယ်လောက်ကြာပါးလွှာခြေထောက်နှင့်သေးငယ်တဲ့ပတ်ပတ်လည်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူပင့်ကူကိုခေါ်နေကြသနည်း arthropods arachnid ၏အတန်းကနေ Opilliones သို့မဟုတ် (LAT ။ Opiliones, = Phalangida) ငျးကှာ။ ယခုနှစ်တွင်, harvestmen ၏ 20056300 မျိုးစိတ်ထက်ပိုရှိခဲ့သည် ...
တစ်ခုကပ်ရောဂါကဘာလဲ? နှင့်ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တုပ်ကွေးရောဂါသလော ကြမ်းပြင်ဧရိယာနှင့်အတူကူးစက်လာသောအခါအဆိုပါကပ်ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ တစ်တစ်နိုင်ငံလုံးတကယ်တော့အန္တရာယ်များတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ်ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တုပ်ကွေးရောဂါကမ္ဘာနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတစ်ခုကပ်ရောဂါကူးစက်အခါတစ်ဦးကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တုပ်ကွေးရောဂါသည် ...
အဘယ်ကြောင့်နကျယ်ကောင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာနစ်နာမှုနိုင်ပြီး, တစ်ပျားရှိသလော ကိုက်ခြင်းနှင့်အူပျားလက်နက် (သို့မဟုတ်မဟုတ်ဘဲ uzhalivaniya) အပြီးမျက်ရည်ကျရှိသညျ့အခါပျား ukusannom နေသကဲ့သို့ကောင်းစွာနစ်နာမှုဒီတော့တစ်ဖြီးနစ်နာမှု ...
မှဲ့ပုံပေါ်သောအရာကို မှစ. ? ကလမ်းပေါ်မှာကနေပုံပေါ်ကကော်ဇောအတွက်ကြက်ဥစွန့်ခွာခြင်းနှင့်ပျံသန်း gdenit ပျံသန်းနိုင်သည်။ ဒီမဟုတ်ခဲ့ကြောင်း, ပိုးဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကိုဝယ်ကြလော့။ ဥပမာဘောလုံး ...
ပင့်ကူ .. ငါ့ကိုအဆိပ်မဟုတ်အဆိပ်ပြောပြကြဘူး ??? သဘာဝကျကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဆိပ်အပြင်း။ အဆိုပါ Voronezh ဒေသတွင်ပုံမှန်ထက် Esch ။ နှင့် Saratov ။ ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ကျနော့်အမြင်အတွက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဆိပ်အပြင်းမဟုတ်ပါဘူးပါပြီ =) သူတို့က = ကအပူပိုင်းဒေသတွင်နေထိုင်) ဖူ !!!! ကျနော်ကျိန်းသေဆှဲမယ်လို့ ...
အဆိုပါငါးမွေးကန်များတွင်ရေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ငါ့ကိုအနံ့။ အဘယ်အရာကိုဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆာလ်ဖိုက်ယိုယွင်း၏အကျိုးဆက်ဖွဲ့စည်းသော Acqua အတွက် Obrazuyutsya ဝင်ပြီးဇုန်, လုပ်ဖို့။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဤသည်ရလဒ်နှင့်အကြောင်းရင်းများဖြစ်နိုင်သည်ပြင်ပေးကြဘူး ...
ကိုယ်ဝန် budgerigar ဆုံးဖြတ်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ? ! : ဘယ်လိုကြက်ဥအချည်းနှီးဖြစ်ကြပြီးသူတို့ viviparous လုပ်ခဲ့တယ်ရှိမရှိနားလည်သလော ကြက်တူရွေးကိုယ်ဝန်မရကြဘူး, သူတို့ကို တင်. ဥ။ မွေးမြူရေးမွေးမြူအကြောင်းကိုနည်းနည်း ...
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,755 စက္ကန့်ကျော် Generate ။